Momba anay - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Vondron'izao tontolo izaono mpanamboatra sy mpanondrana plywood lehibe indrindra ary vokatra mifandraika amin'izany any Shina, izay natsangana tamin'ny taona 1993 niaraka tamin'ny sampana miisa 6. Ankehitriny izahay dia mankafy andiam-pamokarana 73 amin'ny filalaovana gitara miatrika ny sarimihetsika sy ny gitara mahafinaritra.
Ny famokarana karazan-trondro isan-karazany dia 220,000m3 sy 1.000.000m3 ho an'ny trondro miatrika horonantsary isan-taona. Miaraka amina milina mandroso maro, sander Italiana IMEAS, milina fanodinana UROKO Japoney, Veneer Joint Tenderizers ary milina maina lehibe, ny orinasa dia manolo-tena hamokatra sy hanondrana ireo vokatra avo lenta avo lenta indrindra amin'ny sarimihetsika vita amin'ny tabilao sy trondro mahafinaritra ary Antiskid Plywood.
Nahazo ny voninahitry ny "mari-barotra malaza sinoa", "vokatra azo itokisana Jiangsu kalitao" ary "AAA Corporate Credit" izahay.
Ny orinasa dia manizingizina ny fitsipiky ny fifehezana kalitao tsara sy ny fanaovana ny marina hatrany.
Ary ny vokatray dia voamarin'ny IS09001: 2000, IS014001: 2004, CE, FSC, BFU ary amidy amina firenena mihoatra ny 100 eran'izao tontolo izao, toa an'i Alemana, Aostralia, Etazonia, Silia, Libya, Emirà Arabo Mitambatra. , Korea, Japon, sns.
Miaraka amin'ny tanjon'ny fikarakarana ny zavatra takian'ny tsena manerantany, dia niara-niasa tamin'ny mpivarotra ambongadiny fitaovana marobe izahay, tompon'andraikitra amin'ny famolavolana sy OEM amin'ny marika vita amin'ny trondro sy fanaka izy ireo.
Miorina amin'ny fitantanana kalitao avo lenta, ny sevice ary ny teknolojia mitarika, ny vondrona World Home dia mitarika ny tsena ary mirehareha amin'ny fanolorana ireo vokatra sy serivisy ireo ho an'ny mpanjifantsika.